Ihe omumu nke di n'okpuru 12s - The Reward Foundation
Home Gbasara gị Ndị ọrụ maka ihe dị n'okpuru 12s
Ihe ndi di na peeji a adabara n'okpuru 12s. Ha na-elekwasị anya n'inyere ụmụ nwoke aka, mana ụmụ agbọghọ nwekwara ike ịhụ na ha bara uru.
Ee, ọ bụ ihe dịkarịsịrị mkpa ịmata agụụ mmekọahụ, karịchaa mgbe a na-eto eto. Otú ọ dị, ụdị mmekọahụ nke na-egosi na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n’Intanet abụghị iji nyere gị aka ịchọta ụdị mmekọahụ ị bụ n’ezie. Ọ naghị enyere gị aka ịmụ banyere inwe mmekọrịta mmekọ nwoke na nwanyị, ma. Kama ebumnuche ya bụ ịkpalite mmụọ siri ike n'ime gị nke na ịchọrọ ịlaghachi azụ maka ihe ndị ọzọ.
Ikiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n’Intanet bụ ụlọ ọrụ azụmahịa na-akwụ ụgwọ ọtụtụ ijeri pound. Ọ dị iji ree gị mgbasa ozi ma kpokọta ozi nkeonwe gbasara gị. A na-erezi ozi ndị a na ụlọ ọrụ ndị ọzọ maka uru. Enweghị ụdị ihe dịka weebụsaịtị webụsaịtị anaghị akwụ ụgwọ. Enwere nsogbu dị na ahụike na ahụike gị yana mmekọrịta mmekọrịta gị. Ile foto ndị gba ọtọ nwere ike imebi ihe n’ụlọ akwụkwọ ma mee ka mmadụ mee ihe ọjọọ.
Ihe kpatara eji egbochi ngwa ihe agụụ mmekọahụ maka ụmụaka, onye ọ bụla na-erubeghị afọ 18, abụghị imebi ihe ọchị gị, kama iji chebe ụbụrụ gị n'oge dị mkpa na mmepe mmekọahụ. Naanị na ị nwere ike ị nweta ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ site na ịntanetị, ọ pụtaghị na ọ nweghị mmerụ ahụ ma ọ bụ na-enye aka.
Ndị omeiwu UK na-arụrịta ụka banyere iwu ọhụrụ na Online Harms.
“Ihe Did Amaghị Banyere Porn” mepụtara site na enyemaka nke nna na-akụzi sayensị. Ọ na-enyere ụmụaka, ndị nne na nna na ndị nkuzi aka ịmata ihe nwere ike ịba uru na-akpali agụụ mmekọahụ. Ndị sayensị na ndị na-abụghị nke okpukperechi, "Ihe Did Amaghị Banyere Porn" na-akọwa ụfọdụ ọnyà ndị nwere ike iji egwu porn mee ihe n'ụzọ dị mfe, dị mfe nghọta. Ọ na-adọta myirịta dị n'etiti nri ratụ ratụ na porn, ma kọwaa ihe kpatara mmemme ndị a nwere ike iji "zụọ" ụbụrụ, wee bụrụ agwa adịghị mma. Nke a na-eme ka ndị na-eto eto họrọ ime nhọrọ nke ọma gbasara ụdị ihe omume na omume ndị nwere ike iri mmadụ ahụ.
“Ihe Did Amaghị Banyere Porn” bu uzo ato ma odi na YouTube.
Nkebi nke 1 (9.24)
Nkebi nke 2 (9.49)
Nkebi nke 3 (7.29)